U-Anastasia Kostenko noDmitry Tarasov bahlambela kwi-photo shot shoot and fell for false
Ngesinye isikhathi sagqiba ukuzikhumbuza ngokwam umyeni wangaphambili u-Olga Buzovoy. Ngonyaka odlulileyo, umfazi owayesakuba ngumfazi kaDmitry Tarasov akapheleli nje ukunyuka, kodwa ukuba aphephe phezulu kwinqanaba lomsebenzi. Yaye loo mini ayihambanga, ukuze igama elithi Buzovaya lingabonakali kwiindawo ezivulekileyo zeendaba. Emva koko urekhoda olutsha, ke unika enye ikonsathi, ngoko uvela kwisikhululo seTV yelizwe ...
Ngokungafani ne-Buzovoy esebenzayo, uDmitry Tarasov akanalo nto yokuziqhayisa ngayo: akukho mandla amakhulu ekunqobeni kwinqanaba lebhola lebhola, akazange angene kwiqela lezemidlalo ... Lihlala liphela ukuba lisebenzise amava omfazi wakhe wangaphambili ukuba atyelele ingqalelo kwimibonakalo yobomi bakhe.
Namhlanje kwiprogram eyaziwayo ye-StarHit kwakukho udliwano-ndlebe noDmitry Tarasov kunye nesithandwa sakhe u-Anastasia Kostenko. Esi sibini asizange sixoxe ngokuzenzekelayo ngencwadi yakhe, kodwa kwakhona sinenkwenkwezi kwisitampu somfanekiso wesantya ...
U-Tarasov noKostenko bavusa i-negative nge-naked naked naked photos kunye nobuxoki obungqinileyo ngobuhlobo babo
Ngodliwano-ndlebe, uKostenko noTarasov bathi badibene emva kokuba umdlali webhola ehlukane no-Olga Buzova ekwindla ka-2016:
Enyanisweni, ulwalamano lwethu no-Olya lwaphela ekupheleni konyaka odlulileyo. Kwaye noNastya saqala sibonisana kwisangqa sohlobo oluqhelekileyo kwivenkile yokutyela ngoDisemba .
Ngelo xesha, uNastya wayecaphukile kakhulu ngokuba wayebizwa ngokuba ngu-razluchnitsey:
Awu, ngokukhawuleza xa bengakhange bahlambalaze ... Bammangalela ngokuthi uye wakhwela ebantwini bakhe.
Abo ba landela ngokukhawuleza iindaba ezikufutshane malunga nebali eliphakamileyo eliphezulu, abanakunceda kodwa babone ukuba uDmitry Tarasov kunye nentombi yakhe. Kwimicimbi yeendaba, ekuqaleni kukaNovemba kunyaka odlulileyo, inkcazelo ibonakale ukuba inyunyana yentsapho yaseTarabuzikov yaqhekeka ngenxa yemodeli kaAnastasia Kostenko. Awudingi ukuba nguSherlock Holmes ukukhangela i-web kwizinto ezenziwa ngomhla we-9-10 Novemba 2016:
Abasebenzisi be-intanethi bajonga ngokukhawuleza ubuxoki balo mbhangqwana:
Umsebenzi-ndlela sele esele ifoto ye-joint yabo ngo-Oktobha ehambahamba, yintoni inkohliso
olesyavolko Disgust. Kutheni kuxoka ngokunyaniseka? Ewe, uNasosia, wenyuka waya kumnye umntu e-muzhik kwiipenteti.
fdrty3456 Oo, kunjalo, baqamba amanga .. kunye namazwi enyaniso ... Sadibana ngoDisemba, ewe, babeya kulala, ngosuku loqhawulo-mtshato. Ewe, ubomi abuyinto ethanda ...
Ewe, iseshoni yesithombe esingabonakali seDmitry Tarasov kunye no-Anastasia Kostenko abasebenzisi be-Intanethi bagxekwa kwiimithi:
katrina777 ___________ Ifoto engekho
iipelitats Iphi na iimeko ezithandwayo?
_silno_krepko_ Photoshoots ugly😖
mashawelchok 😝Lolu hlobo lwezithombe ezihlazo (njengentlola ye-shot shot) engabiziyo kakuhle kwi-Salsk👌Nastin level kunye nodliwano-ndlebe ngokwawo: luqala ukususela ekuqaleni
Ndiyazi ukuba kutheni uDmitry Tarasov anqume ukunika udliwano-ndlebe ngqo kunyaka omnye emva kokuqhawula umtshato ku-Olga Buzovoy? Ngokwenene, umdlali webhola nje ngoku uyaqaphela ukuba umtshato uya kwenza imali? Siyabona kwiZen le ngcaciso 👍 kwaye sihlala siyazi zonke iinjongo kunye neentlanzi zezoshishino.
Intsha uTina Kandelaki yazama ukufihla iminyaka yakhe
Olga Buzova wabonisa indlela yokwandisa amabele ngaphandle kweplastiki
UAlina Kabaeva wadumala abaphulaphuli "ngokuhlwa ngokukhawuleza"
Uthobekile uMaria Kruglyhina ovela kwi "House-2" etshitshisiwe kwiifoto ezingenanto ezisuka kwindawo yokuhlambela
U-Alyona Vodonaeva wayelahlekile ngeengubo zoboya
Umyeni ka-Elizaveta Boyarskaya wakhupha i-secretatrical secret
Isaladi kwi-radish ne-celery
Umqambi omncinci waseBrithani uqokelela iimali zokudala iqoqo lezimpahla zangaphantsi
Ziziphi izinto ezifunekayo ukuba ndizigqoke kulo nyaka?
Cappeys wonyaka omtsha waseBavaria
Jongana nekhilimu emva kweminyaka engama-30
Ubungakanani besikhumba se-acid (pH)
Indlela yokucoca ipen
Iipropati ezisebenzayo kunye nokusetyenziswa kweengqumbo ze-birch kwiyeza
Rose peretoryaya noshukela
I-Cottage shiese eneziqhamo
Yintoni enokuyenza ngetan ntle?